एमाओवादीको अवको वाटो के ?
[2015-02-02 오후 8:55:00]
राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मीन्छ भन्दै शसस्त्र युद्ध थालेको तत्कालीन माओवादीले बाह्र बुदे हुदै संसदिय राजनीतिलाई स्वीकारेको थियो । पहिलो संविधान सभामा सबै भन्दा ठूलो दल भएको एमओवादीले न त बहुमतबाट संविधान जारी गर्न सक्यो नत सहमतिबाट नै ।
उल्टै आफुलाई संविधान सभाको प्रमुख हकदार ठाने पनि उसैको नेतृत्वको सरकारले संविधान सभा विघटन गर्नु प¥यो । देस्रो संविधान सभामा उसको अवस्था तेस्रो दलमा पुग्यो । तर पनि उसले सबै दलहरुसंग मिलेर भए सहमतिमा, नभए बहुमत प्रक्रियाबाट, संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरको थियो । तर सबै दलहरुले भनेको समयमा संविधान दिन सकेनन् । उल्टै भनेको समय नजिकीदा दलहरु सहमतिमा पुग्नै सकेकन् र झन दुरी बढ्न पुग्यो ।
संविधान जारी गर्नुको सट्टा दलहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्याआरोप गर्नमा लागे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले त सविधान सभा भवनमै तोडफोड समेत ग¥यो । एमाओवादीले आफुलाई सत्ता पक्षले वाइपास गरेर संविधान ल्याउन खोजको भन्दै सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि सत्ता बाहिर रहेका दलहरु संग मोर्चा बनाएर सहमतिमा नै संविधान बनाउनु पर्ने भनिरहेको छ ।
तर अब सत्ता पक्षले भने संविधान निमार्ण प्रक्रियामा गइसकेकाले जसरी भएपनि संविधान आउने बताइरहेका छन् । अहिले एमाओवादीले आफुहरुलाइ काँग्रेस एमालेले पेलेर गएकाले देश भरी नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । उसले केन्द्रीय समिती बैठकबाट सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्न तिन कमाण्डमा विभाजन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
पूर्वी कमानमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, मध्यकमानमा पुष्पकमल दाहाल र पश्चिम कमानमा बाबुराम भट्राई तोकीएका छन । जब कि आफू सरकारमा हुदा आफ्नै पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ताले भन्दा पनि नमानेर एकहोरो रुपमा संविधान जारी गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम भएको भन्दै पार्टी विभाजनलाई पनि स्वीकारेर संविधान सभामा बसेको एमाओवादी अहिले आएर संविधान सभा छोड्न मानसिकताम पुगेको छ ।
के भनकोे जति सजिलो छ, एमाओवादीलाई संविधान सभा छोड्न ? यदि एमाओावादीले संविधान सभा छोड्यो भने उसले संगै लिएर आन्दोलन गरिरहेका अन्य दलहरुले उसलई साथ दिन्छन त ? होइन, भने अब एमाओवदीको बाटो के हुन्छ ? संविधान सभाबाट संविधान जनताको पक्षमा आउदैन भन्दै यो प्रक्रियाबाट पार्टी फुटाएर अलग भएको बैद्य समुह पहिला देखिनै सडकमा छ ।
त्यहि वैद्य समुहबाट केहि समय पहिला अलग भएको चन्द समुह पनि सडकबाट नै विभिन्न जनजीविकाका सवालम आन्दोलन गरिरहेको छ । यसरी आफै बाट छुट्टेर गएका समुहहरुले सडक आन्लोलन गरिरहेको छन भने एमाओवादीको स्थान कहाँ हुन्छ ? के एमाओवादीले आफैबाट छुट्टेर गएका समुहसंग मिलेर सडक आन्दोलन गर्छ त ? होइन भने एमाओवादी अब न सडकको नत संविधान सभाको हुन पुग्ने अवस्थामा आएको छ ।
यदि उसले आफुलाई पुन स्थापित गर्ने हो भने सिधै युद्धमा जानको विकल्प बाहेक अरु केहि छैन होइन भने उसले संविधान सभामा बसेर संविधान ल्याउन सहयोग गर्नु पर्छ र चित्त नबुझेका कुरामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर जान सक्नु पर्छ ।